हामीले घरमा बनाउने र’क्सि’काे ईतिहास यस्तो रहेछ, एकपटक अवस्य पढ्नुहोला मन खुसी हुनेछ
समाचार हामीले घरमा बनाउने र’क्सि’काे ईतिहास यस्तो रहेछ, एकपटक अवस्य पढ्नुहोला मन खुसी हुनेछ
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं: हामीले घरमा बनाउने रक्सिकाे ईतिहास यस्तो रहेछ, एकपटक अवस्य पढ्नुहोला मन खुसी हुनेछ|
संसारमा सबैभन्दा पहिला रक्सि बनाउने भट्टी एउटा ठुलो सिमलकाे रूखकाे तल बनाईएकाे थियाे ! त्यो रूखकाे हागामा एउटा कैलि र मैना बस्थे। त्यो रूखकाे तल एउटा बाघ र सुगुर त्यो रूखकाे छाहरिमा बिश्राम गर्न अाउथे । रक्सि बनाउने पहिलाे दिन त्यो रूखमा अागाे लागेछ त्यहा काेईलि मैना बाघ सुगुर डढेर मरेछन र तिनिहरू चारै जनाकाे अात्मा त्यो रक्सि भित्र प्रबेस गरेछ ।
त्यसैले रक्सि पिएकाे दुई प्याक पछि काेहिलिकाे अात्मा हामि भित्र पस्छ र मिठाे मिठाे कुराहरू अाउछ ! ३प्याक पछि मैनाकाे अात्मा जाग्छ र हामि एउटै कुरामा टया टया गरिरहन्छौ ।
चाैथाे प्याक पछि मात्छाै र बाघकाे अात्मा जाग्छ अनि त कसकाे बाहुकाे के लाग्छ टाेल भरिनै अाफु डन जस्तो लाग्छ सबैलाई थरकाउदै हिडछौ । पाँचौ प्याकमा पुरै झयाप अनि सुगुरकाे अात्मा जाग्छ त्यसपछि के हुन्छ थाहै हाेला नालि नालि डुबुल्की मार्दै मरे जस्तो भएर जहापायाे उहि लडिदिन्छ । स्वास्थयकाे लागि घरपरिवार र हरेक क्षेत्रमा हानिकारक छ धन्यवाद !!